Bit By Bit - Ukuqwalasela ukuziphatha - 2.1 Intshayelelo
Ngomlinganiso we-analog, ukuqokelela idatha malunga nokuziphatha-ngubani owenzayo, kwaye-nini-eyabiza, kwaye ngoko ke ayifumaneki. Ngoku, kwixesha ledijithali, ukuziphatha kweebhiliyoni zabantu kubhaliwe, kugcinwe kwaye kuhlaziywa. Umzekelo, xa unqakraza kwiwebhsayithi, yenza umnxeba kwifowuni yakho yeselula, okanye uhlawule okuthile ngekhadi lakho lesikweletu, irekhodi yedijithali yokuziphatha kwakho idalwe kwaye igcinwe ishishini. Ngenxa yokuba ezi ntlobo zedatha ziyimveliso yezenzo zabantu zansuku zonke, zidla ngokuba ziyi- digital traces . Ukongezelela kule mizila ebanjwe ngamashishini, oorhulumente banakho idatha ecebileyo ngokuphathelele abantu kunye namashishini. Ngokubonke la maxwebhu kunye nekarhulumente ahlala ebizwa ngokuba yimpembelelo enkulu .
Ukukhukhula kwamanzi amaninzi kuthetha ukuba sisuke ehlabathini apho idatha yokuziphatha yayingqongqo kwihlabathi apho idatha yokuziphatha ininzi. Isinyathelo sokuqala sokufunda kwiinkcukacha ezinkulu siyaqonda ukuba inxalenye yoluhlu olubanzi lweedatha ezisetyenziselwe uphando loluntu kwiminyaka emininzi: idatha yolwazi . Idatha, idatha yolwazi naluphi na ulwazi olubangelwa ukujonga inkqubo yentlalo ngaphandle kokungenelela ngandlela-thile. Indlela engafanelekanga yokucinga ngayo kukuba idatha yokuqwalasela yonke into engabandakanyi ukuthetha nabantu (umz., Uphando, isihloko sesahluko 3) okanye ukutshintsha iimeko zabantu (umzekelo, ukuvavanya, isihloko sesahluko 4). Ngaloo ndlela, ukongeza kwiirekhodi zorhwebo kunye nolwaseburhulumenteni, idatha yokuqwalasela iquka izinto ezifana nombhalo wamaphepha epapasho kunye nezithombe ze-satellite.
Esi sahluko sinamalungu amathathu. Okokuqala, kwicandelo 2.2, ndichaza imithombo emininzi yolwazi ngokubanzi kwaye ndacacisa umahluko omkhulu phakathi kwabo kunye nedatha eye isetyenziselwa uphando loluntu kwixesha elidlulileyo. Emva koko, kwicandelo 2.3, ndichaza iimpawu eziqhelekileyo ezilishumi zemithombo yolwazi emikhulu. Ukuqonda ezi mpawu kukukwenza ukuba uqaphele ngokukhawuleza amandla kunye nobuthathaka bemithombo ekhoyo kwaye kuya kukunceda usebenze imithombo emitsha eya kufumaneka kwixesha elizayo. Ekugqibeleni, kwicandelo 2.4, ndichaza iindlela ezintathu eziphambili zokuphanda ozisebenzisayo ukufunda kwidatha yokuqwalasela: ukubala izinto, ukubikezela izinto, nokulinganisa ukulinga.